‘जति बीमाको पहुँच बढ्छ, त्यति भ्रष्टाचार घट्छ’, कसरी ? बीमाविज्ञको यस्तो छ विश्लेषण| Corporate Nepal
असोज ३१, २०७८ आइतबार ११:१५
काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमाको महत्व बढिरहेको छ । बीमा बचत र क्षति भएमा क्षतिपूर्तिका लागि मात्रै नभएर सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि यसको आवश्यकता छ । सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले विभिन्न नौ प्रकारको बीमा आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
व्यक्तिको मृत्यु हुँदा जीवन बीमाले साथ दिन्छ । बिरामी भएको बेलामा स्वास्थ्य बीमाले साथ दिन्छ । बेरोजगार भएको बेलामा बेरोजगार बीमा, अंगभग भएको बेलामा अशक्तता बीमा, बाबुआमा बितेको अवस्थामा बच्चालाई जीवनयापत बीमा जस्ता नौ किसिमका बीमा योजना छुट्याईएका छन् । यी नौ किसिमको जोखिम जो कोहीमा रहने भएकाले बीमाको आवश्यकता रहेको छ । घटना कसलाई कतिबेला घट्छ त्यो त भन्न सकिन्न । तर घट्ना जति बेला घटे पनि त्यसमा बीमाले साथ दिन्छ । यसबाहेक सम्पत्तिको क्षति भएको बेला क्षतिपूतिका लागि सम्पत्ति बीमा हुन्छ ।
बीमा दुःखको साथी हो । सुःखमा त जस्ले पनि साथ दिन्छ । तर दुःखमा बीमाले साथ दिन्छ । त्यसैले सरकारी वा निजी कम्पनी जुनबाट गराए पनि बीमा गराउनु ठूलो हो । अहिले निजी कम्पनी र सरकारी कम्पनी दुवैले बीमा गराउँदै आएका छन् । सामाजिक सूरक्षा कोष पनि बीमाको अवधारणा अनुसार अघि बढिरहेको छ । विभिन्न किसिम जोखिमहरू बढ्दो क्रममा रहेकाले बीमा असाध्यै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।
बीमा गराउनेको संख्या बढ्दा भ्रष्टाचारमा समेत कमी हुन्छ । आफ्नो मृत्यु भइहाल्दा बच्चाको हालत के होला ? भन्नु पर्दैन । त्यसमा पनि बीमाले साथ दिन्छ भन्ने हुन्छ । म अंगभंग भएमा कसरी पेट पाल्ने ? भन्ने चिन्ता पर्दैन् । त्यसमा पनि बीमाले साथ दिन्छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा व्याक्तिलाई बीमाले साथ दिन्छ । जब आर्थिक रूपमा सबल छु भन्ने लाग्छ, त्यस्तो मानिसलाई रोगव्याधी पनि कम लाग्छ । जब मानिसलाई भविश्यको चिन्ता हुँदैन्, पैसा कमाउन भ्रष्टाचार गर्ने, गलत तरिकाले पैसा कमाउने भन्ने कम हुन्छ । बीमा भनेको व्यक्तिको लागि मात्र नभई सभ्य समाज र राष्ट्रको लागि पनि आवश्यक कुरा हो । समाजमा सुशासन कायम राख्न पनि बीमा अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अहिले उद्योग धन्दाको संख्यामा वृद्धि भएको छ । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका हिसाबले पनि बीमा महत्वपूर्ण मानिदै आएको छ । विदेशबाट सामान ल्याउँदा बाटोमा विस्फोट भएमा व्यापारीको अर्बौं रुपियाँसम्म डुब्ने अवस्था आउनसक्छ । उद्योगधन्दामा आगलागी भएर करोडौं रुपियाँको क्षति हुनसक्छ । त्यस्तो ठाउँमा पनि बीमाले साथ दिन्छ । बीमाको महत्व बढ्नुको कारण जोखिम बढेको कारणले पनि हो ।
अहिले औद्योगिकीकरण, विस्फोटक पदार्थको उत्पादन, विषाक्त खानपिनले जोखिम बढिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा ठूला ठूला जोखिम बढेको कारण बीमाको महत्व अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको हो ।
बीमाविज्ञ घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित
बीमा कम्पनी धरासायी भए पनि चिन्ता नलिनुस, बीमितको बोनससहितको रकम सुरक्षित हुनेछ
बोनस दर नघटाउन दबाब दिएपछि अभिकर्ताको कमिशन नै घटाइदिने अन्तिम तयारीमा समिति
सात दिनको तालिम दिएर कसरी नेपालमा बीमा सर्भेयरको पेशागत विकास हुन्छ ? – ई. ढकाल
नेको इन्स्योरेन्सको भवन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने-‘दाबी भुक्तानीमा उदाहरण बन्नु’
म्याद सक्किएको छ महिना बितिसक्दा पनि कवि पाठक बीमा संस्थान धाउन छोडेनन्
खोलाले बगाउने गरी जलविद्युत संरचना बनाइन्छनः सिलवाल, डाँडामा लगेर बनाउने त ?– पाण्डे